Isitiya seTempile eNgena sandi kwiBar Square w/ithala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLaura&Diego
Amagumbi okulala ama-2 anamhlanje kwaye athambileyo angenasandi kwi-Temple Bar Square, eyona ndawo ilungileyo onokuba kuyo. Indawo eqaqambileyo, elungiswe kakuhle kwimigangatho ephezulu ngoyilo olunesitayile. Indawo ekhululekile kunye nephangaleleyo enazo zonke iimod-cons kunye neefestile ezimbini zokunciphisa ingxolo yangaphandle. Okumangalisayo kwe-55-Inch SMART TV kunye nebhedi enkulu yesofa. Indawo entle yophahla ejonge kwiTempile Bar Square. Kumgama wokuhamba ukuya kwezona ndawo zinomtsalane zaseDublin kunye nobomi basebusuku. Ukufikelela lula kwizithuthi zikawonke-wonke. Isiseko sakho esigqibeleleyo!
Isanda kuhlaziywa kumgangatho ophakamileyo kakhulu, igumbi lethu elihle elinendawo yokulala eli-1 likwintliziyo yeTempile Bar, eyona ndawo yaseDublin kunye neyona ndawo iphilayo. Indawo isandula kuhlaziywa ngokupheleleyo kwaye yahlengahlengiswa ngendlela enesitayile & ekhululekileyo kunye nabahambi engqondweni. Sinikezela ngezinto eziluncedo zale mihla. Sifake iifestile eziphindwe kabini, ezingenasandi zokunciphisa ingxolo yangaphandle ukuze ulale kakuhle phakathi kweTempile Bar. Intloko nje yesenzo sokwenyani!
Mhlawumbi eyona ndlu ilungileyo ye-AIRBNB kumbindi wesixeko saseDublin ukuba unqwenela ukuphonononga yonke iDublin kunye neTempile Bar ekufuneka uyibone!
Igumbi lokuhlala elilungiselelwe kakuhle elinesofa enkulu
55-intshi Smart TV
Isifudumezi esinesitayile esitsha
Itafile yokutyela enezitulo ezitofotofo
Ikhitshi elitsha kraca lixhotyiswe ngokupheleleyo
Ifriji enebhokisi yesikhenkcisi, i-oveni, iihobs, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi
I-Microwave, iketile kunye netoaster
Kubonelelwe ngeti, ikofu kunye nezinto zokupheka
Igumbi lokulala elipholileyo elinebhedi ephindwe kabini
Umatrasi otofotofo kunye nelinen yohlobo lwehotele, iduvet kunye nemiqamelo
Iimfama zasebusuku zobumnyama obugcweleyo ngaphakathi kwigumbi
Iheater entsha kunye newodrophu
Igumbi lokuhlambela loyilo oluphezulu
Iitawuli zesimbo sehotele zinikezelwe
Ijeli yeshawa encomekayo, isuphu yesandla kunye nesomisi seenwele
Uphahla olumangalisayo olujonge isikwere sebha yetempile
I-Wi-Fi ekhawulezayo, ukusetyenziswa kwe-55-intshi ye-Smart TV, iilinen zokulala kunye neetawuli zibandakanyiwe kwixabiso
Iifestile ezigqwesileyo ezingenakuvakala
UK/EU Travel Converters zibonelelwe
Imizobo ehonjisiweyo kunye nemizobo ejikeleze indlu
4.54 · Izimvo eziyi-145
Indawo yethu yokuhlala ikwintliziyo yeTempile Bar, eyona ndawo yaseDublin. IBar yeTempile yeyona ndawo idlamkileyo yaseDublin kwaye idume kakhulu ngabakhenkethi. Yeyona ndawo ilungileyo ukuba kuyo njengoko kuhlala kukho into yokwenza kwaye uyiphonononge, siqinisekile ukuba uya kukonwabela ukuhlala nathi!
ITempile ngummelwane womlingo. Ii-pubs ezixineneyo zibamba umculo wesintu ophilayo kunye neeseti ze-DJ, kunye nezidlo zipakisha iindawo zokutyela ezikhonza eAsia, eMelika naseIreland. Iiboutiques ezinqabileyo zithengisa iimpahla kunye nemisebenzi yezandla ngabayili basekhaya. ULondolozo lweeFoto zeSizwe luqaqambisa ixesha elidlulileyo laseIreland, ngelixa iZiko lobuGcisa leProjekthi kunye neGalari yeTempile yeBar + Studios ibonisa ubugcisa bale mihla.
Umbuki zindwendwe ngu- Laura&Diego
Uya kufumana iingcebiso zasekhaya kunye nabakhenkethi kunye neengcebiso malunga neendawo zokutyelela, izinto onokuzenza, ii-pubs, iindawo zokutyela, iimyuziyam, iiklabhu, njl.njl. Ndiya kufumaneka ukuphendula nawuphi na umbuzo onokuba nawo ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho.
Uya kufumana iingcebiso zasekhaya kunye nabakhenkethi kunye neengcebiso malunga neendawo zokutyelela, izinto onokuzenza, ii-pubs, iindawo zokutyela, iimyuziyam, iiklabhu, njl.njl.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dublin City